Ndụmọdụ maka njem dị mfe na nke bara uru karịa karịa sitere na Pirelli - RayHaber
HomeỤWAEurope39 ItalyNdụmọdụ maka njem dị mfe na nke bara uru karịa Pirelli
08 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 39 Italy, Europe, ỤWA, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey 0
Ndụmọdụ maka njem dị nchebe ma nwee ụba karịa pirelli
Onye isi taya nke Pirelli nke tiretali, tupu ncheta ezumike ezumike na ncheta ọkụ na-eche ndị ọkwọ ụgbọala. Nke kachasị, nrụgide ikuku adịghị mma na taya, belata omimi ụkwụ, n'ihi taya ndị ahụ na-agbachasị agbadata ma sie ike na ngọngọ nke isi, taya ahụ na-adaba n'olulu ma ọ bụ pavu (nke a na-akpọ balloon ma ọ bụ mkpụrụ n'etiti ndị mmadụ) bụ ihe ize ndụ nke ịnya ụgbọ ala nchebe. Ojiji nke oge oyi na-adabaghị maka oge ọkọchị n’oge okpomọkụ nke + 7 na n’elu na-eme ka oriri mmanụ na-abawanye ụba.
Ka Eid al-Adha dara n’August n’afọ a, ọtụtụ puku mmadụ na-akwado ịbanye n’ụzọ maka ezumike na ezumike. N'ihi oge ọkọchị nke ezumike, ndị ọkwọ ụgbọ ala na-eche njem siri ike na nnukwu okporo ụzọ na ihu igwe na-ekpo ọkụ. Maka njem dị mma, na-eburu n'uche ọnọdụ nke oge ọkọchị, ọ dị ezigbo mkpa iji na-ebu akwụkwọ nyocha ndị dị mkpa.
Nrụgide ikuku, omimi ala, enweghị cracks ma ọ bụ balloons na taya, dabara maka oge bụ isi okwu ekwesiri ịtụle maka taya nke nwere otu njikọ n'okporo ụzọ ma nwee ike iburu ibu na abras na-abawanye nke ukwuu na ogologo njem.
Mmebi a na-ahụghị anya na-emebi nchekwa ịkwọ ụgbọala
Karịsịa obere mbe na taya, balloons ma ọ bụ gbawara na sidewall nwere ike ịbụ ihe egwu dị ukwuu n'okpuru ọnọdụ ibu. Mgbu ma ọ bụ ịta ahụ megide paụrị, ihe mgbochi na ihe mgbochi ndị ọzọ, nwere ike imebi mmebi ahụ n’akụkụ taya. Taya tiwara agbawa ma na-acha uhie uhie nwere ike ibute ihe ọghọm na iyi ọtụtụ awa njem.
N'ụdị ndị a, ọkachamara ga-enyocha taya taya gị. Mbibi nke usoro taya (dịka protrusion a ma ama na sidewall, elu ma ọ bụ balloon) adabaghị maka ịkwọ ụgbọala nchekwa yana achọrọ dochie taya ahụ.
Iyi na taya gị nwere ike ịkpọ oku mberede
Ihe ọzọ a ga-atụle n'oge njem bụ omimi nke taya. Ikike ịdị na taya gị kwesịrị ịdị nha n’ebe dị iche iche n’akụkụ obosara ya na obosara ya, na-abụghị otu isi, yana uwe na-adịghị mma nke nwere ike ịbụ site ngbanwe na-adịghị mma ma ọ bụ ọkwa nrụgide.
Ọ bụrụ na ị nọ njem dị anya ma eyikwasịkwa taya gị dị elu, dochie taya dị ezigbo mkpa. Na mgbakwunye, mbelata omimi nke taya nwere ike ịkpọ mberede. Ọbụlagodi na ebe dị omimi ya adịghị n'okpuru iwu akwadoro, oge ụfọdụ iyi akwa gị nwere ike ịdị njọ. Nke a nwere ike ibute ogologo ụzọ ịdị ogologo oge ma ọ bụrụ na ihu igwe adịghị mma ma ọ bụ mmiri ozuzo, nke nwere ike ibute ikuku, na-ebute njikwa ụgbọ ala.
Etu esi elele nrụgide nke taya gị?
Ihe ọzọ ị ga - eme tupu ị ga - eme njem bụ ilele ikuku ikuku nke taya gị. Agbanyeghị, a ga-enwerịrị nlele a mgbe taya ahụ ka dị oyi tupu ịmalite apụ. N’ihi na, n’ihi njem ahụ, a na-ebugharị ụgbọ ala ndị ahụ ma na-enwe ihu igwe kachasị elu n’oge ndị a, taya ndị ahụ na-ekpo oke ọkụ ma na-agbanwe na nrụgide ikuku mgbe kilomita ole na ole gasịrị. Igwe ikuku nke taya gị ga-abụrịrị n'usoro nke onye na-anya ụgbọ ala tụrụ aro, na-eburu n'uche ọnọdụ ibu. A pụkwara ịchọta ụkpụrụ ndị a na n'ime ọnụ ụzọ, n'ime okpu ọkụ, ma ọ bụ na akwụkwọ mmado na uwe aka dị ka enyere na ntuziaka onye ọrụ. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ịnwere igwe eji eme ihe n'ọnọdụ ọ bụla adịghị njọ, ịkwesịrị icheta ya ma debe ya na nrụgide kachasị elu.
Ejila taya oyi na udu mmiri
+ Taịlị n'oge oyi 7 eji na ihu igwe dị n’elu ma karịa bụ oke mmekpa ahụ nchekwa na oriri mmanụ. Anyi na-eji taya udu mmiri n’oge udu mmiri; nchekwa pụtara na anyị na-ahapụ akụ na ụba na nkasi obi. ADAC - German Automobile Club (General German Automobile Club) ule ndị a na-eme site n'iji taịlị n'oge ọkọchị na-akwụsị nkwụsị oge ọkọlọtọ mụbara site na 44 pasent.
Ozugbo emechara usoro niile dị mkpa maka taya gị, ọrụ kachasị mkpa bụ ịlele ọkwa nke mmiri mmiri, dịka mmiri, mmanụ na mmiri nhicha ma kpochaa ma ọ bụrụ na ha na-efu. Mgbe ahụ, cheta ka ị lelee isi ọkụ na oriọna na-enweghị isịneke, gụnyere ọkụ brake na ọkụ ọkụ ikike nke ọkụ ikike.
Ị gaa Akçaray ugbu a dị nchebe 13 / 02 / 2019 Obodo ukwu dị na Kocaeli, ọrụ efu na ụzọ Akçaray, nke na-emepụta ọnọdụ ọjọọ maka okporo ụzọ na ndị na-agafe agafe. N'ebe a, Obodo ukwu bụ nke ikpeazụ; Izmit obodo nke East n'ogige Station, na Baghdad Street Nkuku iwepụ arọ okporo ụzọ nsogbu na Ankara Market Street nrutu ebe ụlọ ahụ nationalized. Ngalaba mkpofu obodo, nke malitere ịkwatu ụlọ ahụ ekpochapụrụ, ga-amalite ịbawanye okporo ụzọ mgbe arụchara ọrụ. Mkpebi MGBE nnweta Izmit akporo nke tram oru ngo na Kocaeli ụzọ Akçaray malitere ijere ọha na eze na ndị East n'ogige Station, ụlọ odude ke nrutu na Street Nkuku Bagdat Caddesi, mkpebi e maka expropriation. Na nso nso a Geç
Njem Nzuzo na Ụgbọ Osimiri 29 / 11 / 2018 Obodo ukwu dị na Kocaeli na Ụgbọ njem. Akcearay na-ejere ndị Kocaeli ozi maka ihe karịrị afọ 1. N'ụtụtụ n'etiti 06: 00 na 24: 00 n'abalị, tram, nke mere ka njem njem obodo dị na ógbè Izmit dị na Kocaeli, aghọwo ụzọ kasị mma maka ndị njem nke Kocaeli n'ụzọ dị mkpirikpi. A na-emezi ugbo ala ugbo ala Akçaray kwa oge maka nchekwa nke ndi njem. 6 TIME MAINTENANCE IS PERFORMED TransportationPark si ọkachamara na-elekọta otu na-enye 6 mmezi ọ bụla ụgbọ otu ugboro n'afọ maka ụmụ amaala na-aga n'enweghị nsogbu. Na nke a, ụgbọala 4 ọ bụla otu ugboro n'afọ 10 puku na-arụ ọrụ, 1 otu ugboro n'afọ ...
Ime njem na-agafe na Mersin 18 / 04 / 2018 Obodo Mersin Metropolitan na-akwadebe iji kwadebe ụgbọ ala azụmahịa niile, ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ ala bọs na ụgbọ ala nke nwere ngwaọrụ nchebe nke nwere ike nyochaa ma na-ele anya ozugbo. A ga-edebe mpempe akwụkwọ azụmahịa niile, ụgbọ ala ụgbọ ala na ụgbọ ala na Mersin Metropolitan Municipality. Ekele maka ngwa nke na-enye njem nchebe, ụmụ amaala agaghịzi aga njem na egwu. Na ngwa nke Mersin Metropolitan Municipality Transportation Department mepụtara, ọtụtụ ihe mere dịka igbochi ime ihe ike megide ndị ọkwọ ụgbọala, izu ohi na iyi egwu Mersin
Ọpụpụ dị na Kocaeli na-enye Ụgbọ njem na-adịghị mma 07 / 06 / 2019 Obodo Kabul nke obodo Kocaeli Kabaoğlu district nke Izmit district site Prof.Dr. Ihe gafere ebe a na-eme njem na Baki Komsuoğlu Street bụ mmepụta nke mgbakwunye ígwè. Ihe gafere ga-ekwe ka ụlọ obibi TÜRGEV ​​dị n'okporo ámá na ndị obodo ahụ gafee n'okporo ámá ahụ n'enweghị nsogbu. NKWU ỤLỌ NKWU ỤLỌ 70 TON UTARA Azụ ogwe ụkwụ dị ugbu a na-arụ ọrụ n'ime nnukwu ọrụ ọkpụkpụ. Na mkpokọta, e ji 70 ígwè ígwè mee ihe na njem gafere ma na-edozi isi ụlọ ahụ ma guzobe mmiri ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, e mechawo ndozi nke ụlọ elu dị elu. ANYỊ NA-AHỤ NDỊ Kabaoğlu Neighborhood Na Baki Komsuoğlu Street ...
Njem Nzuzo na Cableway 04 / 03 / 2015 Njem nchekwa na Uludağ USB Cable: Bursa Teleferik AŞ na-ebugara ndị njem na-aga n'etiti Teferrüç-Hotels Region na mkpuchi mkpuchi mberede. Ihe nnọchianya nke Bursa na nke malitere iji ihu ya ugbu a rụọ ọrụ, eriri ụzọ ahụ na-enye ụzọ ọzọ dị mma maka njem njem gaa Uludağ, nchekwa, nke ọma. Kilomita 9 n'etiti Teferrüç-Hotels Mpaghara na ụdọ kacha ogologo n'ụwa na ọdịiche nke ịbụ eriri okporo ụzọ kacha ogologo, Bursa Teleferik AŞ nwere mkpuchi mberede nke onwe ya nke Uludağ mere ugbu a. Ndị agha Veterans na di na nwunye ha, 1, n'okporo ụzọ, nke na-enyekwa njem njem akụ na ụba. ogo nwụrụ n'ihi okwukwe ndị ikwu, odo pịa kaadị…
Nnukwu ụgbọ ala Cable na-eme njem dị ukwuu 04 / 03 / 2015 Njem nchekwa na Uludağ USB Cable: Bursa Teleferik AŞ na-ebugara ndị njem na-aga n'etiti Teferrüç-Hotels Region na mkpuchi mkpuchi mberede. Ihe nnọchianya nke Bursa na nke malitere iji ihu ya ugbu a rụọ ọrụ, eriri ụzọ ahụ na-enye ụzọ ọzọ dị mma maka njem njem gaa Uludağ, nchekwa, nke ọma. Kilomita 9 n'etiti Teferrüç-Hotels Mpaghara na ụdọ kacha ogologo n'ụwa na ọdịiche nke ịbụ eriri okporo ụzọ kacha ogologo, Bursa Teleferik AŞ nwere mkpuchi mberede nke onwe ya nke Uludağ mere ugbu a. Ndị agha Veterans na di na nwunye ha, 1, n'okporo ụzọ, nke na-enyekwa njem njem akụ na ụba. ogo nwụrụ n'ihi okwukwe ndị ikwu, odo pịa kaadị…
Petlas aro maka njem njem na Bayram 08 / 06 / 2018 Turkey si taya Petlas meere ememe, na-adọrọ uche gaa otu ihe dị mkpa maka obi ụtọ njem. Petlas kwa-eme ka oriri gafere mma ma na-atọ ụtọ njem, na-akwọ njikere gbapụ maka inye free taya na-ere ahịa na ihe karịrị 500 akara ọrụ Turkey. Ọtụtụ ndị nọ ná mba anyị, n'ihi Ememe Ramadan nke nleta ezinụlọ na ịkwadebe maka ụzọ ezumike; Turkey si taya Petlas ụfọdụ ebe mesie mkpa nke a mma ma na-atọ ụtọ na njem. Ihe ndị Petlas dọtara uche maka nchebe okporo ụzọ n'oge njem ezumike na-achịkọta site n'aka onye ahịa Marketing Erkal Özürün. Nchekwa ịkwọ ụgbọala na-amalite site na Taịa Ịkwọ ụgbọala na-enye nsogbu, ...
Jiri ụgbọ mmiri GEFCO mee njem dị nchebe 11 / 04 / 2014 GEFCO si iPad ngwa na odi mfe iga: GEFCO, iji nye magburu onwe ya mma ọrụ ahịa ọrụ na akpakanamde ụlọ ọrụ, ewepụtawo ihe ultra-otutu iPad ngwa n'ime ụlọ ọrụ. Ngwa ngwa iPad a ga-eme ka ọ dịkwuo mfe iji wụnye njikwa ngwaọrụ. Fieldworkers ga-eme ka arụmọrụ chọrọ nke chọrọ ngwa, na-ewere n'ime akaụntụ ụgbọala njem odi mfe. The "Nwụnye Checker mepụtara ikwado ụbọchị ọrụ nke echichi controllers" iPad ngwa ga-enyere ìgwè ahụ ụgbọala loading elekọta .. Na 2011 GEFCO FVL (Emechara Vehicle lọjistik) na oge ngwa e mere site na otu nke GEFCO Group asaa osisi n'ụwa nile ...
Akwụkwụ ahụ na-adabere na Coruh adịghịzi mma ugbu a 01 / 07 / 2014 Ọfụma a kwụsịrị na Coruh ugbu a adịghị mma: N'akụkụ nke Borcka nke Artvin, akwa mmiri kwụ ọtọ nke ruru ebe na-agbaji, nke e mechibidoro ka e wughachi ụgbọ njem ma meghere. Aslan Atan, onye isi ochichi nke district ahụ, kwuru na akwa ụlọ nkwụba ahụ na Coruh na-egosipụta ọdịbendị nke ógbè ahụ n'otu oge ahụ nakwa na akwa ahụ bụ ihe nnọchianya. Ya na Gọvanọ Gọvanọ Şakır Öner Öztürk, onyeisi obodo Aslan Atan, tinyere onye isi oche nke AK Party, bụ Şükrü Ertürk, kwuru.
Ụzọ okporo ụzọ ga-adị nchebe 30 / 03 / 2015 Ụzọ ndị dị n'okporo ụzọ ga-adị nchebe: Ụlọ ọrụ sayensi sayensị nke Kadir University kwadoro iji belata ihe ize ndụ ma mee ka ụzọ okporo ụzọ dị nchebe site n'ịgba ume iji ụgbọ ala ndị dị oké ọnụ ahịa n'abalị. Ụgbọ njem buru ibu na nnukwu ibu ụgbọala-Mobile Crane Operations Workshop wetara ndị nnọchianya nke mpaghara ahụ ọnụ. N'oge ogbako nke Kadir University bu, nke a na-ekwu banyere mkpa na mmepe nke oru. Kadir University, nke Kadir University, kwadoro, kwuru na e nwere ọrụ nhazi sayensị. Assoc. Dr. Omar Faruk gorci nke a mahadum na Turkey maka oge mbụ, a iwu ...
Ị gaa Akçaray ugbu a dị nchebe
Njem Nzuzo na Ụgbọ Osimiri
Ime njem na-agafe na Mersin
Njem Nzuzo na Cableway
Nnukwu ụgbọ ala Cable na-eme njem dị ukwuu
Petlas aro maka njem njem na Bayram
Jiri ụgbọ mmiri GEFCO mee njem dị nchebe
Ụzọ okporo ụzọ ga-adị nchebe